September 26, 2020 873
सानै उमे’रमा बस चालक बने’का सुजन बाबु गुरुङले आफ्नो मनपर्ने गायिका रचना रिमाल’लाई भेटेका छन् र उनको गीत गाउने सपना पनि हामी पुरा गर्दै छौं ।
रचना सँगै सुजन’को पहिलो गीत चाँडै नै रेकर्ड हुँदैछ, गीतको भि:डियो सहित चाँडै आउँनेछौं । साथै बिदेश’मा रहनु भएका नेपालीहरुले सुजन:लाई केहि सह’योग रकम पनि पठाउनु भएको छ । सह’योगीहरुलाई मुरी मुरी धन्यवाद । रचनालाई भेटेर सुजनले के भने ?
सुजन’ निकै इमान्दार, नरम स्वभावका छन्। सुजन’संग एउटा लुकेको कला छ, उनी सुम’धुर स्वरमा गीत गाउंछन् । उनको ठुलो सपना छ,गीत रेकर्ड गर्ने अनि सबैले चिन्ने गा’यक बन्ने । सुजन बाबु गुरुङको जीवन कथा कुनै फिल्म’को जस्तो छ ।
यति सानो उमे’रमै उनले अनेकौं दुख भोगेका छन् । परिवा’रको माईलो छोरा उनी ११ बर्षको उमेरमै स्कुल’बाट भागेर गाउंबाट काठ:माडौं छिरे र यहां भाडा माझ्नेदेखि अनेक का’म गरे । सुजनको आमा बिरामी छिन्, भर्खरैको पहिरोले भए’को सानो घर पनि लग्यो, बुवा कान सुन्दैनन् ।
अनि क’माई गर्ने सुजनको पनि लकडाउनले गर्दा पहिले जस्तो कमाई छैन, आमाको उपचार गर्न उनी’संग पैसा छैन । आमा’को लागि लेखेको गीत सुनाउंदै सुजन एक्कासी भक्का’निए ।
Prevबेरोजगार श्रीमतीले मेरो कमाई भन्दै श्रीमानलाई दिईन् १० करोड, श्रीमतीको काम थाहा पाउँदा चकित !
Nextआज कुन जिल्लामा कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्
गायिका टिका सानुलाई श्रीमानले कुटे’पछि,आँखामा चोटै’चोट (हेर्नुहोस् अभिनित भिडियो)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (62284)
भर्खर बिहे गरेकी स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (60048)
आँचलले लेखिन् आलोचकहरुलाई मन रुवाउने पत्र, पलको विषयमा यसो भनिन् (भिडियो) (51835)
वीर अस्पतालमा आँखा झिकि’एको भन्ने शवको भिडियो बाहिरियो, यस्तो रहेछ भिडियो..हेर्नुहोस्.. (50441)
आँचलले कसलाई हाल्ने भइन् मुद्दा? प्रमाण सहित उजुरी दिन प्रहरी कार्यालय पुगेपछि..(भिडियोसहित) (46328)
एक पिता जो छोरी लिन स्कुल पुग्दा उनको पाइन्ट अगाडिपट्टि भिजेको थियो ।सबैले पुरा पढ्नुहोला (45940)
अचान’क छोरीको मोबाईल हेर्दा आमाबुबाको उ’ड्यो होस,यसबाट सबै जना सचे’त रहनुहोला (38024)
बेवारिसे श’व भनेर फेवातालवाट बाहिर निकालेपछि कृष्णको उड्यो होस्, आफ्नै भाईलाई मृ’त देखेपछी (भिडियोसहित) (33525)
फेरि ह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य , यस्तो छ आजको सुनको भाउ (31584)
विवाहपछि श्वेता र विजयन्द्रको पहिलो टिकटक ,भिडियो भयो भाईरल, लाखौंले हेरे (भिडियो हेर्नुस्) (31292)
अर्जुन विक पक्रा’उ परेपछि उनको डेरा पुग्दा यस्तो देखियो, घरभेटीले खोलिन् वास्तविकता (भिडियो सहित)
आज अमेरिकी डलर सहित अन्य देशको मुद्राको भाउ यस्तो छ